Xog:- Waa kuma Ninka Ajnabiga ah ee loo maacaabayo gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Somalia? Maxaase lagu xushay?.
January 12, 2019 marqaan Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 2
Wixii xilligaas ka dambeeyay jagadaas banaan waxaa codsaday 150 Qof oo Soomaali iyo Ajaanib isugu jira, waxaana laga soo xulay (Shortlisted),16 qof, wareysigii waxaa ka soo gudbay 7 qof oo ay saddex Ajaanib tahay, 4na Muwaaddiniin Soomaali ah yihiin.
Nigel Roberts,waxaa uu u dhashay Dalka UK, waxaa uu sanadkii 1981dii ku biiray Bangiga Adduunka, waxaa uu ka shaqeynayay qeybta Dhaqaalaha Beeraha (agricultural Economist).
Waxaa uu lataliye Bangiga adduunka uga noqday arrimaha Dhaqaalaha ee Soomaaliya, Myanmar, Falastiin, Lebonan.
Waxaa uu muddo ku noolaa kana shaqeyn jiray dalalka kala ah; Thailand, Kenya, Ethiopia, iyo Nepal,inta badan waxaa uu ka ahaa agaasime ama la taliye,waxaana uu in ka badan 40 Sano ku jiray arrimaha dhaqaalaha iyo Beeraha, Shahaaddada dhaqaalaha Beeraha waxaa uu ka qaatayJaamacadda Reading University ee Dalka UK.
Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa dhawaan meel mariyay xeer oggolaanaya in Bangiga dhexe ee dalka uu Guddoomiye ka noqon karo qof Ajannabi ah, waxaa lagu waday in maanta uu Golaha shacabka ka doodo xeerkaas, hayeeshee kulanka ayaa dib u dhacay,waxaana lagu wadaa in aymeel mariyaan 14ka Bishan oo Golaha shacabka loo ballamiyay in ay isu imaadaan.
Ninki somaliga aha haddu tuug noqday oo u wixi loo dhiibo xadayo see lagu aamina somali.
Shiikh shariif wuxu xaday 71 million dollar
Xassan xoolo wuxu xaday 160 million dollar
Yaa aaminaya nin somali Qabiil iyo qudhun wax ku xadaya.
ninkaas baa kawada dareen iyo damiir roon anigu codkayga waa siiyey waase inuu ciqaamad qaato waar aduunku waa khamaar ee aqoonta iyo aaminka gata